Healthy Pantry Projects-Galveston County Food Bank
Iiprojekthi zePatri esempilweni
Sisebenza ngamakhekhe okutya kuyo yonke iGalveston County ukubanceda benze ukhetho olusempilweni ukhetho olulula kubathengi babo! Ubusazi ukuba abamelwane bethu abangakhuselekanga ngokutya bakumngcipheko ophezulu wesifo esinganyangekiyo? Singabanceda benze isiseko esomelele ngakumbi ngokwandisa ukufikelela kwabo kukutya okunesondlo ngelixa siqwalasele iimfuno zabo.
Bona ulwazi oluthe kratya malunga nezifo ezingapheliyo kunye nokunqongophala kokutya kumgaqo-nkqubo wethu wesebe kunye neenjongo apha (cofa apha).
Jonga ividiyo yethu emfutshane yokwazisa malunga nendlela esixhasa ngayo amaqabane kwiprojekthi engezantsi! (faka ividiyo engezantsi)
Sinamaqabane kuyo yonke indawo!
Ukusebenzisana namanye amahla endawo sisibonelelo senkqubo!
Nanga amaQabane ethu asempilweni ePatry:
IGalveston County yokutya kweBhanki yokuKhetha abaThengi-isiXeko saseTexas
Iinkonzo zokuKhathalela iiNkonzo zoPhathiswa-isiXeko seLigi
IiNkonzo zeNtlalontle ze-MI Lewis-uDickinson
Izibonelelo zobambiswano lwethu zibandakanya ukucwangcisa, inkxaso, izimvo kunye nenkxaso-mali ukunceda abathengi bakho benze ukhetho olusempilweni ukhetho olulula. Sisebenza nokwandisa ukutya ukukhuthaza , iintlobo zeminikelo, kwaye unike abathengi ukuzimela ukuba bakhethe ukuhlala besempilweni kwaye babaxhobise ngcono ukuba bazi indlela yokuphila impilo esempilweni.
Unomdla wokuba liqabane lempilo elisempilweni?
Iinkcukacha zoqhagamshelwano kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org ngolwazi oluthe kratya!